प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महेन्द्रको अन्तिमआक्रोश ~ Khabardari.com
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महेन्द्रको अन्तिमआक्रोश
दश बर्से जनयुद्ध लडेर तपाईंले नेपाललाई स्विजरल्यान्ण पनि बनाइ सक्नु भयो ।अब के बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?यो गम्भीर प्रश्न रहेकोे छ? प्रधानमन्त्री ज्यु तपाइलाइ छेद बिछेद हुने गरि लेखिएका विभिन्न
किसिमका धेरै लेखहरु ,समाचारहरु पढे । तपाइका फोटोहरुमा टाउको जोडेर बनाइएका र त्यसमा लेखिएका अनगिन्ती तुच्छ शब्दहरु देख्दा मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो ! तर तपाइलाइ रमाइलो लागेछ क्यारे ? आजसम्म सुनिदिनु भएन आम नेपालीको कथा ? बुझिदिनु भएन मर्म ? अनि बिसिदिनु भयो भुकम्प पीडित र चटक्कै भुलिदिनु भयो दस बर्से जनयुद्धमा देखेका सबै सपनाहरू ........?
" हुदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुइचार सपूत मरेर नगए "
परिवर्तनको नाममा हजारौं मान्छे बिस्तापित भए ।हजारौं मान्छे सहिद भए । कति बेपत्ता भए ? कति दिदीबहिनीको सिन्दुर पुछियो ? हजारौं आमाको काख रित्तियो ? दाजुभाइको सपनाहरू टुटे । रगतको खोलो बग्यो यो देशमा । हजारौंको संख्यामा अपांग भए । म पनि जनयुद्धमा ज्यान गुमाएको परिवारको एक सदस्य हु त्यसैले मन बल्झिन्छ घरीघरी ? । देशमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भनेर डरै डरमा भए पनि तपाइँलाई भोट हालियो अनि जिताइयो ।तर आज कति दुख लाग्छ ती दिनहरू सम्झदा ...................!!!
के नौ / नौ महिनामा सरकार फेरेर देशमा ठुलो परिवर्तन आउँछ? आम नेपालीको प्रश्न हो तपाइँलाई ? यो देशमा शान्ति सम्झौता देखि लिएर ठुला ठुला निर्णय गर्न सक्ने खुवी भएको मान्छे हो तपाईं । तर धिक्कार लागेर आउँछ । अहिले देश दोन्दको एउटा दुर्घटनाबाट भर्खरै उठेको ,फेरि ,भुकम्पले अर्को बिपत्ति आइलागेको यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोे छ देश ।अझै देशलाई ठुलो दुर्घटनातिर धकेल्ने तपाईंहरुको सोचलाइ छिटो परिवर्तन गर्नुस् ? र जुन जुन शीर्ष नेतालाई तपाईंको पाटिबाट जन्माउनु भएको थियोे ती सबैलाई समेटेर टुक्रिन नदिइ एकजुट भएर लाग्नुस । यदि तपाईंले साच्चिकै परिवर्तन चाहानु भएको हो भने नत्र यो देश फेरि अर्को दुर्घटनातिर नजाला भन्न सकिन्न ...........?
............... महेन्द्र चापागाईं,माडी चितवन